"नेपालका लागि नेपाली" अभियान अाबश्यकता कि बाध्यता ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	"नेपालका लागि नेपाली" अभियान अाबश्यकता कि बाध्यता ? » Nepal Fusion
“नेपालका लागि नेपाली” अभियान अाबश्यकता कि बाध्यता ?
२०७६ कार्तिक १५ गते शुक्रवार
“नेपालका लागि नेपाली” अभियान चल्दै छ, नेपालमा एक हिसाबले ठिक हो । किनभने, हामीले काम नपाएर बेरोजगार भएर अभियान चलाएका पक्कै होइनौ । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र बेथितिका बिरुद्ध आवाज उठाउनु निकै राम्रो काम हो । अहिले देशमा यति धेरै भ्रष्टाचार भएको छ कि, अब चुप लागेर बस्न सकिँदैन । जाे पनि बोल्न बाध्य नै हुन्छ । आज १७ हजार मान्छे मारेर गणतन्त्र ल्याउनेहरु नै राज्यसत्ताकाे वरिपरि घुमिरहेका छन् । देशमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र अर्थात् जनताकाे सत्ता ल्याएकाे दाबी गर्नेहरुकाे रबैया देख्दा लाग्छ, यिनी त नयाँ राजाहरु बनेर निस्किए छन् ? गणतान्त्रिक मुलुकमा बसेर बोल्न डराउनु पर्दा, बिगतकाे बलिदान र जनताकाे त्यागकाे कुनै मूल्य देखिदैन । अाम नागरिककाे दृष्टिकोणवाट हेर्दा यस्तो लाग्छ कि, उच्च अहोदामा बसेकाहरु चाहिँ जे गर्दा पनि हुने- जसो गर्दा पनि हुने रहेछ ? तिम्रो नांगो नाच कहिलेसम्म हेर्ने हामी नेपाली जनताहरुले ? तिम्रो नाैटंकी प्रति नेपाली नागरिक अाजित बनिसकेका छन् । अब जनता तिम्रो बिरुद्ध लाग्ने बेला सुरु भएको छ ।
तिम्रा अाफन्त र नातागोताहरु त मन्त्रालय र बिभागमा सुरक्षित रुपमा जागिरे बनिरहेका छन् । गरिब जनता छाेराछाेरीलाई राेजगारी खै ? रोजगारको सम्भाबना थुप्रै भएको मेरो देशमा ८० लाख भन्दा बढि युवा खाडीमा श्रम गर्न बाँध्य भएका छन । युवाहरुका लागि कुनै समय साेच्ने फुर्सद भयाे – गणतन्त्रका छाेटे राजाहरुलाई ? दिनानुदिनदेशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार बढदै गएको छ । यस्तो अबस्थामा जनताले प्रश्न गर्न नपाउने कस्तो गणतन्त्र हो ? आज देशको यो स्थिति देख्दा १७ हजारको बलिदान ब्यर्थ भए जस्तो लाग्छ । तिमीहरूले नै गरेका काला कर्तुत र दमनका बिरुद्ध आवाज उठाउन बाध्य भएका छाै । “नेपालका लागि नेपाली” अभियान हामी सबै नेपाली नागरिकको अधिकार र आबश्यकता हो ।
देश बिदेशमा रहनुहुने सबै दाजु-भाइ, दिदि-बहिनी, बुबा-अामाहरुमा अभियान चलाउनु बाध्यता नै हो किनभने आज देश समृद्धिको बाटो तर्फ, बिकासको बाटो तर्फ लागेको भए हामी यो अभियान चलाउने थिएनाै । देशमा भइहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र ८० लाख युवाको मतदान सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उदेश्य हो । यो अभियान रहर नभई, बिल्कुल बाध्यता पनि हो ।